Maxaad kataqaan Khasaaraha Maaliyadeed ee weerarkii Pizza House? | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Maxaad kataqaan Khasaaraha Maaliyadeed ee weerarkii Pizza House?
Dhalinyarada Maalgeshatay Pizza House ayaa maanta idaacadda Goobjoog ee magaalada Muqdisho ku taalla uga waramay khasaaraha maaliyadeed iyo midka nafeed ee ka soo gaaray qaraxii Maqaahida.
Milkiilayaasha ayaa sheegay in ay markii hore ku maalgeliyeen Pizza House lacag badan $300,000, hadana Khasaaraha ka dhashay weerar Al-shabaab ay June 14, 2017-kii ku qaadeen uu gaarayo in ka badan $165,000.
Pizza House oo ah maqaahi iyo goob madadaalo oo ay dhalinyarada ka helaan Pizza, ciyaaro, 7D, Sawirro iyo arrimo kale oo dhalinyarada ku madadaalaan, waxaa la aasaasay April 2016-kii.
Sida uu sheegayo Tifaftiraha Idaacadda ganacsiga ee Goobjoog Cabdiweli Jaamac Barre, waxaa goobtan fikradeeda lahaa dhalinyaro dalka wax ku baratay, dhalintan ayaa ku maalgeliyay goobta lacag dhan $300,000.
Lacagta ay ku bilaabeen markii hore intaa waa ay ka yareed laakin waxaa ballaarin lagu sameeyay maalmo ka hor qaraxa, iyada oo loo diyaar-garoobayey Ciidda.
Dhismayaasha ay ku kordhiyeen waxaa ka mid ahaa Hool weyn oo xafladaha ah, waxaana si gaar ah u iman jiray ardeyda iyo dadka eheladooda sagootinaya.
Khasaaraha Maaliyadeed Ee Piza House:
NO Sheyga Gubtay Lacagta
1 7D Oo Ku fadhiyay $35,000
2 Hoolka Cusub: $60,000
3 Agab iyo Mashiinnada $40,000
4 Dhismaha $20,000
5 Khasaare Kale: $ 10,000
Guud Ahaan: $165,000
Khasaaraha Maaliyadeed marka laga soo tago, waxaa goobta ku geeriyooday 3 qof oo shaqaalaha ka tirsan, Hal waardiye ah, mid nadaafad, Kabalyeeri iyo nin Suuriyaan ah oo kerin jiray cuntada fudud.
Cabbaas oo ka tirsan Pizza House ayaa sheegay in qaraxa kadib ay isbar-bar dhigeen in la xiro goobta iyo in la soo celiyo isaga oo intaa raaciyay in la isla gartay in dagaal u geli doonaan dib u soo celinta goobtaas.
Pizza House waxaa ka shaqeyn jiray 36 qof, waxaana milkiilayaasha ay sheegayaan in aan abid goobtaasi lagu cabin Sigaar iskaba daa Shiishad iyo Music.
Qarax ka dhacay Piza House iyo Posh June 14, 2017, waxaa ku dhintay in ka badan 25 qof halka ay ku dhaawacmeen 30 kale, qaraxa waxaa sheegtay xarakada Al-shabaab.